Kumiswe uhlelo lwezobumnandi oseludlale iminyaka engu-8 ku-DStv | isiZulu
Kumiswe uhlelo lwezobumnandi oseludlale iminyaka engu-8 ku-DStv
BUKA: UMaCele uthi akudikizi nqulu ngokukhulunywa ezinkundleni
I-SABC ingase iqondise izigwegwe uRobert Marawa ngokuduba uhlelo
Cape Town – Uhlelo oluyintandokazi olugxile entsheni noludlala maphakathi nezinsuku kuVuzu Amp (DStv 103), iV-Entertainment, “luya ekhefini”.
I-V-Entertainment, nedidiyelwa i-Don't Look Down Productions, njengohlelo lwaseNingizimu Afrika lwempilo yabantu abasha olususelwe kwi-E! News, lwasimamisa abethuli bezinhlelo abafana noLalla Hirayama, lwaphinde lwanikeza namathuba kubethuli bezinhlelo abafana noNonhle Thema, uSiya Ngwekazi, uDineo Moeketsi, uDenise Zimba kanye noShelton Forbez.
OLUNYE UDABA: BUKA: Ukhale izinyembezi usaziwayo ethula okokugcina uhlelo lukamabonakude
U-M-Net utshele iChannel24 ngoLwesithathu ukuthi iV-Entertainment ayinqanyulwanga. Kodwa-ke lolu hlelo angeke lusaba semoyeni ngemuva kweminyaka engu-8 njengoba luzothatha ikhefu, esikhundleni sokuthi luqhubeke lube semoyeni ngesikhathi lusahlelwa kabusha.
I-V-Entertainment izovala ngesiqephu “esiyisipesheli” esizothatha ihora lonke ngoLwesihlanu, mhlaka-30 Juni ngo-18:00.
Ngokusho kwemithombo engaphakathi, iV-Entertainment maningi amathuba okuthi ishaye ibuya isiyisiqephu esingena kanye ngesonto kusukela ngo-Agasti kodwa nakanjani angeke ibuye isadlala njalo maphakathi nezinsuku.
Lolu hlelo obeludlala kwiVuzu Amp kanye neVuzu maningi amathuba okuthi lugcine sekuwuhlelo oludlala kwi-Vuzu Amp kuphela.
Oyi-Director of Local Entertainment Channels kwa-M-Net, uReneilwe Sema, uthi iV-Entertainment yenza okwakungale kwalokho okujwayelekile ngenkathi yethula ithalente elisha kubabukeli bayo.
“Usiko lwezobumnandi luhlale luguquguquka futhi kumele sitshintshe kanye nalo.”
Cpt: 14-16°C Pta: 10-25°C
Jhb: 7-21°C Bloem: 5-22°C
Dbn: 17-26°C PE: 13-21°C
Bedfordview - 14:52:00 PM STATIONARY TRUCK after Gilloolys Interchange - SLOW MOVING TRAFFIC Ezinye zasemigwaqeni